OTU ESI EME KA EBE DI ỌCHA NA AVTOKAD - AUTOCAD - 2019
Otu esi eme ka ebe nchekwa di na AutoCAD
Ọtụtụ ndị ọkachamara na-ahọrọ ịrụ ọrụ na AutoCAD site na iji usoro ndabere dị omimi, ebe nke a enwechaghị mmetụta na ọhụụ. Ebere ndabara a site na ndabara. Otú ọ dị, n'oge ọrụ, ọ nwere ike ịdị mkpa iji gbanwee ya ka ọ bụrụ ìhè, dịka ọmụmaatụ, ka iji gosipụtara eserese ngosi. Ụlọ ọrụ ọrụ AutoCAD nwere ọtụtụ ntọala, gụnyere nhọrọ nke agba ya.
Isiokwu a ga-akọwa otú ị ga-esi gbanwee ndabere na-acha ọcha na AutoCAD.
1. Malite AutoCAD ma ọ bụ mepee otu n'ime eserese gị na ya. Pịa bọtịnụ òké aka nri na Wọkspeesi na window meghere họrọ "Ngalaba" (na ala nke windo).
2. Na "Ihuenyo" taabụ na "Elements nke window", pịa bọtịnụ "Agba".
3. Na kọlụm "Gburugburu", họrọ "2D Space Model". Na kọlụm "Egwuregwu Egwuregwu" - "Ọdịsọ ihe." Na ndepụta ndetu "Agba" edoziri ọcha.
4. Pịa "Nabata" na "OK."
Adịla agbagha agba agba na agba. Nke ikpeazụ bụ maka agba nke njirimara interface ma debekwa na ntọala ihuenyo.
Nke a bụ usoro usoro ndabere niile na arụ ọrụ ọrụ AutoCAD. Ọ bụrụ na ị malitere ịmụ ihe omume a, gụọ isiokwu ndị ọzọ banyere AutoCAD na weebụsaịtị anyị.
Anyị na-enye ndụmọdụ ka ị gụọ: Otu esi eji AutoCAD